कान्तिपुर दैनिकका सह–सम्पादक बलराम बानियाँ मृत भेटिए, के हो रहस्य ? — Sanchar Kendra
कान्तिपुर दैनिकका सह–सम्पादक बलराम बानियाँ मृत भेटिए, के हो रहस्य ?
काठमाडाैं । तीन दिनदेखि बेपत्ता कान्तिपुर दैनिकका सह–सम्पादक बलराम बानियाँको शव फेला परेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले मकवानपुरको भिमफेदि गाउँपालिका स्थित सिस्नेरीको माण्डु हाइड्रोपावरमा उनको शव फेला परेको जानकारी दिए।
बानियाँ सोमबारदेखि बेपत्ता थिए। बानियाँको शव पोस्टमार्टमका लागि हेटौंडा अस्पतालमा लगिएको छ। ‘उनी तीन दिनदेखि परिवार साथीभाइ र कार्यालयमा सम्पर्कमा नरहेको भन्दै कान्तिपुर दैनिकले बुधबार बिहान उजुरी गरेको थियो’, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता सोमेन्द्रसिंह राठौरले जानकारी दिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सिसिटिभी फुटेज र एक जना प्रहरीले सोमबार बानियाँलाई बल्खु चोकमा देखेका थिए। प्रहरीले उनीसँग केहीबेर सोधपुछ गरेका थिए। बानियाँले सोमबार दिउँसो करिब एक बजे कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लेख पठाएको जानकारी कार्यालयलाई गराएका थिए ।
त्यसपछि उनी सम्पर्कमा थिएनन् । कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण कान्तिपुरका अधिकांश सम्पादकीय कार्य घरबाट भइरहेका छन् । बानियाँ पछिल्लोपटक एक दशकभन्दा अघिदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत थिए । त्यसअघि पनि उनले कान्तिपुर, नागरिकलगायतमा सम्बद्ध रही पत्रकारिता गरेका थिए । उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।